Accueil > Gazetin'ny nosy > Kabarin’i Hery Rajaonarimampianina: Tsy misy lojikany
Kabarin’i Hery Rajaonarimampianina: Tsy misy lojikany
Niteraka ady hevitra sy fanehoam-pijery teo amin’ny sokajin’olona maro hatrany ny lahateny nataon’ny filohampirenena Rajaonarimampianina nandritra ny lanonam-panjakana noho ny asaramanitry ny taona vaovao teny Mavoloha ny zoma teo. Isan’ireny ny filazany fa “tsy misy fahagagana izany ho vitan’ny mpitondra fanjakana”.
Eny, tsy misy mitaky fahagagana eto, ary filam-boa tsy hary koa izany raha misy mitady an’izany. Raharaham-pirenena no resahina ary fomba fijery siantifika no ifampitondrana sy ifampifehezana amin’izany. Misy lalànany ny lojika siantifika fa tsy anaovana fangala-piery toa izao fomba fitondrana izao.
Satria ny filohampirenena Rajaonarimampianina tsy mba nanana sori-dalana politika nijoroany, dia tsy mahagaga raha tsy hainy ny mitantana ny raharaham-pirenena. Satria ny filoha Rajaonarimampianina tsy nanana rafitra politika matotra (appareil politique) ho fanoitran’ny fampahombiazany ny raharaham-pirenena tantaniny, dia tsy zendana izahay raha mivaralila ny zavatra rehetra ambarany fa irosoany. Olona mpamadika sy mpikatsaka tombontsoa manokana amin’ny fomba rehetra no miara-dia aminy ao an-dapa ao sy nanakinany ny raharaham-pirenena any amin’ny ambaratongan-drafi-panjakana any fa tsy olona nipoitra avy amin’ny vokatry ny famolavolana ara-politika toy ny misy amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana tena izy ka izao fahantram-bahoaka mihoa-pampana izao no vokany.
Ny filoha Rajaonarimampianina koa tsy niomana ny hitondra raharaham-pirenena sy fanjakana ka tai-dronono mandroatra isa-maraina. Fomba fitondrana niainan’ny firenena Malagasy nandritra ny 57 taona izany ka tsy mahagaga koa raha izao no fisehon’ny ataony.
Raha tsy misy fahagagana tokoa àry amin’ny fitantanana firenena dia mba hazavao koa ny hoe “mandritra ny efa-taona nitondrana dia tsy nahavita na ny farafahakeliny amin’ny fampiharana ireo fepetra takian’ny lalàna velona ka hitera-bokatsoa ho an’ny vahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny”!
Filazanay matetika eto fa tsy ilàna na iandrasana fanjanaham-bola avy any ivelany, na fikaonandoham-pirenena na lalàna mbola hiadian-kevitra eny amin’ny Parlemanta ny fampitsaharan’ny mpitondra ny kolikoly avo lenta fa fanapahan-kevitra avy hatrany sy fampiharana izany avy hatrany dia efa zava-dehibe ho an’ny vahoaka. Toraka izany koa ny fanamparam-pahefana amin’ny harem-pirenena sy amin’ny volam-panjakana. Inona moa no andrasana ankoatry ny finiavana politikan’ny mpitondra fanjakana ka tsy manodinkodina volam-panjakana raha misy raharahan’Antoko Hvm hatao, ohatra, na misy fitetezam-paritra ataon’ny Hvm?
Tsy fahagagana no mitranga raha miroso amin’izany ny mpitondra fa tena endriky ny fitiavan-tanindrazana izany. Taratry ny finiavan’ny mpitondra hametraka ny tena fanjakana tsara tantana sy tany tan-dalàna. Na izany aza anefa tsy vitan’ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny nampihatra sy nampahomby azy, dia ho gaga ve isika raha tsy misy vokany ny ataon’ny fitondrana satria tsy misy lojika siantifika?
Dia izany ny fototry ny zavatra nataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina nefa izy dia mahita sampona amin’ny hoe “nihena ho 72% ny tahan’ny vahoaka mahantra raha 92% izany tamin’ny 2014 niakaranay teo amin’ny fitondrana”.
Ho an’ny vahoaka tokoa aloha, efa fahagagana be ny fahavitan’ny fitondram-panjakana iray mampihena ny mahantra ao aminy nefa fitondrana tsy manana sori-dalana politika matotra, tsy manana rafitra politika manaraka ny fenitra tokony ho izy, mpitondra fanjakana mbola miankin-doha amin’ny any ivelany, mpitondra fanjakana mpanome vahana ny mpanani-bohitra vahiny handroba harena eto, fitondram-panjakana tsy manana politikam-pirenena ho amin’ny fanajariana fotodrafitrasa hiantohana ny fampivelarana ny fiainam-bahoaka, fitondram-panjakana tsy manana politikam-pirenena matotra amin’ny fampiakarana sy fiantohana ny raharaham-panabeazana ho an’ny zanaky ny vahoaka manerana ny nosy, fitondram-panjakana tsy afaka akory miahy ny vahoaka ianjadian’aretina ao aminy fa vao mainka mandatsa izany noho ny fahantran’ilay marary na ny fianakaviany ka tsy afaka manefa ny saram-pizaham-pahasalamana akory, fitondram-panjakana tsy afaka mampîvaingana ny vahaolana hampiroboroboana ny tontolom-pandraharahana ara-toekarena, fitondram-panjakana tsy manana politikam-pirenena momba ny famoronana asa, fitondram-panjakana tsy sahy manome vahana ny tontolon’ny fikarohana sy ny fampianarana ambony eto, sy ny maro tsy voatanisa e! Raha nisy anefa ireo dia ho nisongadina ny vokatra ka na tsy fahagagana aza dia ho tsirim-panantenana ho amin’ny ho avy rehetra.